Hlola i-China - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eChina
Okufanele ukwenze eChina
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeChina
Bukela ividiyo ekhuluma ngeChina
Hlola iChina, eyaziwa ngokusemthethweni njengePeople's Republic of China izwe elikhulu eMpumalanga ye-Asia (elilingana ne-United States of America) enabantu abaningi kakhulu emhlabeni.
Njengoba unogagasi oLwandle i-East China Sea, Korea Bay, uLwandle oluLwandle, kanye nolwandle lwaseNingizimu China, iwela imingcele yezizwe ze-14. Leli nani lamazwe angomakhelwane lilingana kuphela nomakhelwane omkhulu waseChina osenyakatho, Russia.
“Angisiye owazalwa enolwazi. Ngingumuntu othanda izinto zakudala, futhi ngizimisele ngokukufuna lapho. ”- UConfucius
Impucuko yaseChina yama-5000 eneminyaka emine ubudala ibekezelele eminyakeni eyizinkulungwane yesiphithiphithi nokuvukela, izinkathi zeminyaka yobukhazikhazi kanye nokuxinana ngokufana. Ngomfutho osanda kwenziwa wezomnotho owasungulwa izinguquko ze-Deng Xiaoping, iChina iphinde ibe yinye yezizwe ezihola phambili emhlabeni, ikhungethwe yisibalo esikhulu sayo, nenkuthalo yemithombo yemvelo. Ukujula nobulukhuni bezimpucuko zaseChina, ngamagugu alo acebile, kujabulise abantu baseNtshonalanga abanjengoMarco Polo noGottfried Leibniz ngokusebenzisa umgwaqo uSilk kanye nezindlela eziningi zokushintshana ngamasiko emashumini eminyaka adlule, futhi bazoqhubeka nokujabulisa - futhi bewilder - isihambi namuhla .
Umlando orekhodiwe wempucuko yaseChinese ungalandelelwa uye esigodini saseYellow River, kuthiwa "ungowokuzalwa kwempucuko yaseChina". I-Xia Dynasty yayiwumbuso wokuqala wokuqala ukuchaza emlandweni wasendulo, noma kuze kube manje, abukho ubufakazi obuphathekayo bokuthi ukhona owatholakalayo. Noma kunjalo, ubufakazi bemivubukulo bubonise ukuthi okungenani, impucuko yaseChina yasendulo yethuthukile yaqalwa yinkathi echaziwe.
Isimo sezulu neTerrain
Isimo sezulu saseChina siyahlukahluka kusuka kwendawo eshisayo eseningizimu kuya kwe-subarctic enyakatho. IHainan Island ilinganiswe ngasendaweni efanayo Jamaica, ngenkathi iHarbin, idolobha elikhulu elisenyakatho, icishe ibe Montreal futhi inesimo sezulu esilinganayo. INyakatho China inezinkathi ezine ezihlukene ezinezihlobo ezishisa kakhulu nobusika obubandayo. ISouthern China ivame ukuba mnene futhi ibe manzi. Isimo sezulu simanzi kakhulu enyakatho nasentshonalanga. Ezindaweni eziphakeme zaseTibetan nasezindaweni ezinkulu nasezintabeni ezinkulu zaseGansu naseXinjiang, amabanga makhulu futhi izwe lihlala liyinyumba.
I-China inamaholide amakhulu amahlanu ngonyaka:
Umkhosi WaseShayina Wonyaka Omusha noma Umkhosi Wentwasahlobo - ngasekupheleni kukaJanuwari / maphakathi noFebhuwari
I-Qingming festival - imvamisa i-4-6 Apr, noma usuku ethuneni, amathuna agcwele abantu abaya ukuyokukhipha amathuna okhokho babo banikele imihlatshelo. I-traffic esendleleni eya emathuneni ingaba nzima.
Usuku Lwabasebenzi noma uSuku loMeyi - 1 Meyi
IDrack Boat festival - Usuku lwesihlanu lwenyanga yesihlanu yenyanga, imvamisa ngoMeyi-Jun. Imijaho yesikebhe nokudla ama-zongzi, amaphakethe enziwe elayisi anamathela) kuyizingxenye zendabuko zalo mgubho.
Usuku lwe-Mid-Autumn Day- Usuku lwe-15th lwenyanga yesishiyagalombili yenyanga, imvamisa ngo-Okthoba. Ibizwa nangokuthi uMkhosi Wekhekhe Lomhlaba ngemuva kokusayinwa kwawo, amakhekhe wenyanga. Abantu bahlangana ngaphandle, babeka ukudla etafuleni futhi babuke inyanga egcwele yokuvuna ngenkathi bekhuluma ngempilo.
Usuku Lukazwelonke - 1 Okthoba
Izifunda zase China
I-Northeast China (iLiaoning, Jilin neHeilongjiang)
dōngběi, amadolobha "amabhande okugqwala", amahlathi amakhulu, ithonya laseRussia, laseKorea, nelaseJapan, nobusika obude
I-North China (Shandong, Shanxi, Inner Mongolia, U-Henan, Hebei, Beijing, Tianjin)
I-Yellow River Basin, isizalo sempucuko yaseChina kanye nenhliziyo yomlando
I-Northwest China (Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai neXinjiang)
Indawo yenhloko-dolobha yaseChina yeminyaka ye-1000, izindawo ezinotshani, ogwadule, izintaba, abantu bokuma kanye ne-Islam
I-Southwest China (iTibet, iYunnan, iGuangxi neGuizhou)
Ingxenye exotic, abantu abambalwa, ebabazekayo okumangazayo and the kwasemuva isikhumulo semikhumbi
I-South-central China (i-Anhui, iSichuan, iChongqing, iHubei, iHunan neJiangxi)
Izindawo zokulima, izintaba, ama-gorges emifula, amahlathi athobekile nashisayo asezindaweni ezishisayo
I-Southeast China (iGuangdong, iHainan neFujian)
Isikhungo sokuhweba sendabuko, indawo esebenza ngogesi, kanye nezwe lakokhokho iningi lamaShayina aphesheya kwezilwandle
I-East China (Jiangsu, Shanghai noZhejiang)
“Izwe lezinhlanzi nelayisi” (elilingana neChina 'nomhlaba wobisi noju'), amadolobha amanzi endabuko, kanye namadolobha amakhulu achumayo
Beijing - inhlokodolobha nesikhungo samasiko
IGuangzhou - elinye lamadolobha achuma kakhulu nenkululeko eningizimu, eduze i-Hong Kong
IGuilin - indawo ethandwayo yabavakashi baseChina nabakwamanye amazwe ngezentaba ezihlaba umxhwele kanye nokubuka umfula
I-Hangzhou - idolobha elihle kakhulu nesizinda esikhulu embonini kasilika
I-Kunming - inhlokodolobha yaseYunnan kanye nesango eliya endaweni yokugcwala kwezindawo ezinobuzwe obuncane
INanjing - idolobha elidumile lomlando namasiko anamasayithi amaningi omlando
Shanghai -Sidume ngokuba sedolobheni eliseduze nomfula, idolobha elikhulu laseChina liyisikhungo esikhulu sezentengiso esinamathuba amaningi okuthenga
ISuzhou - "Venice eMpumalanga, ”idolobha lasendulo elalidume ngemisele nangezingadi ezisentshonalanga yeShanghai
I-Xi'an - idolobha elidala kakhulu nenhlokodolobha yasendulo yaseChina, ekhaya kwabanabangu-10 kubandakanya uHan kanye noTang, ukuphela komgwaqo wasendulo weSilk, nekhaya lempi yama-terracotta
Yangang - "I-Epitome of China" enomlando weminyaka engaphezu kwe-2,500, uMarco Polo wasebenza njengombusi waleli dolobha iminyaka emithathu ngasekupheleni kwekhulu le-13th.
UChengdu - "Ikhaya leziqhwaga ezinkulu". Yasungulwa ngaphambi kweXi'an. Yidolobha elikhulukazi lesiFundazwe saseSichuan futhi inikela ngokudla okuhle kakhulu nokunambitheka kakhulu.
Ungahamba uye kulamadolobha amaningi usebenzisa izitimela ezintsha ezisheshayo. Ikakhulu, umugqa we-Hangzhou - uShanghai - uSuzhou - weNanjing yindlela elula yokubona lezi zindawo zomlando.
I-Great Wall yaseChina - ubude obude kune-8,000 km, lolu donga lwakudala luyindawo ebaluleke kunazo zonke yaseChina
IHainan - isiqhingi esiyipharadesi esishisayo esiqhutshwa yintuthuko esindayo yabavakashi
I-Jiuzhaigou Nature Reserve - eyaziwa ngokuthi yindawo yokuhlala yama-gias amakhulu kanye nezimpophoma zayo ezinamazinga amaningi namachibi amibalabala
ILeshan - edume kakhulu ngesikebhe sayo esikhulu somfula i-Buddha neNtaba i-Emei eseduze
IMount Everest - idlula umngcele phakathi kweNepal neTibet, le yintaba ephakeme kunazo zonke emhlabeni
IMount Tai - enye yezintaba ezinhlanu zobuTaoist eChina, futhi ngenxa yomlando wayo, intaba ekhuphuke kakhulu eChina
I-Tibet - iningi lamaBuddha laseTibetan nesiko labo lendabuko likwenza kwehluka
ITurpan - endaweni yamaSulumane eXinjiang, le ndawo yaziwa ngamagilebhisi, isimo sezulu esibuhlungu nesiko le-Uighur
I-Yungang Grottoes - ngaphezu kwe-50 emigedeni eseceleni kwentaba nenombolo yama-recesses igcwele izithombe ze-51,000 Buddhist.
Ulimi olusemthethweni lwaseChina iStrand Mandarin, olususelwa kakhulu olimini lwesiBeijing, olwaziwa ngesiShayina njengePutonghua. IMandarin bekulokhu kuwukuphela kolimi olusetshenziswe kwezemfundo ezwenikazi kusukela kuma-1950s, ngakho-ke abantu abaningi bayalukhuluma.
Abafundi baseChinese bafunda isiNgisi njengesihloko esiyimpoqo esiqala kusukela sekwedlule isikhathi ekuqaleni noma esikoleni esiphakathi. Ukuphasa ukuhlolwa kwesiNgisi kuyisidingo sokuthola iminyaka emine yaseyunivesithi, noma ngabe kunkulu kangakanani. Kodwa-ke, ukugxila kwemiyalo kuwo wonke amazinga kuyilimi olusemthethweni futhi, ngokwezinga elincane, kubhala kunokukhuluma noma ukulalela. Ngenxa yalokho, iningi labantu abasha ezweni lingasifunda isiNgisi esithile, kodwa bangakwazi ukuba nengxoxo ngolimi.
Izithonjana ezisezingeni eliphakeme, ezinentengo ephakeme zitholakala kalula. Ngokwesiko, ukubhucungwa umzimba kuwukuhweba kwezimpumputhe e-Asia.
Ukuzivocavoca ngezinyawo kutholakala kabanzi, kuvame ukukhonjiswa yisithombe sonyawo olungenalutho uphawu.
Ukuzivocavoca umzimba wonke nakho kusakazekile. Kunezinhlobonhlobo ezimbili: i-ànmó isisindo esijwayelekile; ama-tuīná agxila kuma-meridians asetshenziswa ku-acupuncture. Imisipha yochwepheshe kunazo zonke izibhedlela ze-massage, noma ezibhedlela zemithi ejwayelekile yaseChina. Inani elihle lisezindaweni ezincane ezingaphandle kwendawo abanye abasebenzi babo abayizimpumputhe.
Lezi zinhlobo ezintathu zokuxubha zivame ukuxutshwa; izindawo eziningi zinikela ngazo zontathu.
Uma uhlela ukuhlala isikhathi eside eChina, cabanga ngokufunda ezinye zezobuciko bendabuko. Ukuya eChina kuyithuba eliyingqayizivele lokufunda izisekelo, noma ukulungisa amakhono asuvele wakutholile, ngokuqondile kubasebenza izingcweti ezweni lobuciko. Amadolobha amaningi anezifundo ezamukela abaqalayo, futhi ukungazi amaShayina ngokuvamile akuyona inkinga njengoba ukufunda kuyisibonelo nokulingisa.
Ubuciko bempi kanye noTaichi
Labo abanesikhathi nokuthambekela bangatadisha ubuciko obudumile bokulwa baseChina. Abanye, njenge-tai chi bangafundwa ngokumane bavakashele noma iyiphi ipaki yedolobha ekuseni bese belandela lapho (kuzoba nothisha, abangahle babe othisha). Obunye ubuciko bempi budinga ukutadisha okujulile. Izinhlelo ezaziwayo zobucwebecwebe zibandakanya lezo eziseThempeleni laseShaolin eMount Song naseWu Wei Temple eduze naseDali.
I-China inemidlalo eminingana yendabuko evame ukudlalwa emasimini etiye, emapaki omphakathi, noma ngisho nasemgwaqweni. Abadlali bavame ukuheha izixuku zababukeli. Imidlalo emibili yamabhodi eyaziwayo esekelwe eChina e-Go kanye ne-chess yaseChina. UMahjong, umdlalo odlalwa ngama-tile, uyathandwa futhi udlalelwa imali, yize ukuhlukahluka kwawo kwesifunda kudinga ukufunda imithetho emisha lapho uhambela izindawo ezihlukile. Phakathi kokuhlukahlukana okwaziwayo kwalo mdlalo yizinguqulo zesiCantonese, iTaiwan nezaseJapan. Ama-Chinese Checkers, ngaphandle kwegama lawo, awaveli eChina kepha angatholakala. AmaShayina amaningi angabadlali abanamakhadi; Uthando lukaDeng Xiaoping ngebhuloho lalingaziwa kakhulu.
Ukuthi udlani eChina
Ukuphuza e China
Izidakamizwa ezingekho emthethweni
Ukuba namacala noma ukushushumbisa izidakamizwa ezingekho emthethweni kuyicala elibi eChina futhi nokuba neCannabis ozisebenzisela yona kungaholela ekuboshweni. Ukugcizelela kubuthakathaka, kepha izinhlawulo zinzima kumenzi wobubi obanjiweyo. Kwamanye amadolobha afana neBeijing, amaphoyisa ajwayele ukubona abantu bangaphandle njengeqembu elinobungozi obukhulu. Ukuhlolwa komzimba kungenzeka emgqonyeni we-expat. Ukuseshwa okungahleliwe kwezimoto kungenzeka emaphandleni, futhi uma ubanjwa nezidakamizwa, ungalindeli ukuthi ukwelashwa okuvunyelwe emaphoyiseni. Ukuhweba ngezidakamizwa kungaholela ekujezisweni okuyimali enkulu, lapho abantu bakwelinye izwe bengadedelwa.
AmaShayina akakuthandi ngokuphelele ukusetshenziswa kwezidakamizwa, mhlawumbe ngoba ukuthotshiswa kwawo eminyakeni edlule ye-150 kuhlobene nokusabalala kwezidakamizwa. I-cannabis, i-heroin ne-LSD ziyefana kwabaningi babo, ikakhulukazi ezizukulwaneni ezindala.
AmaShayina awaphuzi amanzi aqonde empompini, futhi izivakashi akufanele nazo. Onke amahhotela (ngisho nezikebhe) ahlinzeka ngebhodlela le-thermos lamanzi abilisiwe emagumbini ezivakashi (ligcwaliswa yisikhonzi saphansi) noma - okuvame kakhulu - iketela isivakashi esingalisebenzisa ukubilisa amanzi. Ngokuvamile, amanzi kampompi aphephile ukuwaphuza ngemuva kokubilisa. Amanzi ahlanziwe, afakwe emabhodleleni atholakala kabanzi nebhodlela elincane. Bheka ukuthi uphawu ku-cap aluphuliwe. Ubhiya, iwayini neziphuzo ezithambile nakho kushibhile futhi kuphephile.
Kusukela ukuphela kukaMeyi 2014, zonke izinsizakalo ezihlobene ne-Google, kufaka phakathi i-Google Search, i-Gmail, i-Google Map neGoogle Humusha ayisebenzi eChina. I-block engakaze ibonwe ezinsizakalweni zakwa-Google futhi azikho izizathu ezibhengeziwe. I-YouTube, i-Facebook, i-Twitter, iBloggspot, i-WordPress, i-Picasaweb ne-WhatsApp konke kuvinjelwe.
I-Wikipedia ne-Flickr ziyatholakala, yize amakhasi e-lulimi lwesiShayina aqukethe amagama agqamile angabangela uhlelo lokucwaninga, olubizwa nge-Golden Shield (noma nge-euphemistically, iGreat Firewall noma i-GFW) futhi kuholele kumlayezo "ukuxhumana kwakho kusethwe kabusha".
I-China inabasebenzisi abaningi be-inthanethi ukwedlula noma yiliphi elinye izwe emhlabeni futhi amathofi e-Intanethi ayeningi kulo lonke elase China. Iningi lazo lenzelwe ama-gamers noma futhi azizona izindawo eziwusizo zokwenza ibhizinisi. Kushibhile ukusebenzisa ikhompyutha, yize ihlangana nesoftware yaseChina. Amakhekhe e-Inthanethi kuthiwa adinga abasebenzisi ukuthi bakhombise ukuhlonza (ipasipoti). Ithrafikhi ingaqashwa, futhi wazi ukuthi kungahle kube nezimpawu zokuqopha ezingemuva kwe-malware ezingemuva.
I-WI-FI igcwele ezitolo zekhofi nezindawo zokudlela eziningi. I-WI-FI yamahhala ihlinzekwa ezindaweni zokudlela ezinhle ezifana ne-Starbucks, iCosta Coffee, ezinye izindlu zakwaMcDonald nezindlu eziningi zekhofi ezizimele. Kodwa-ke, amanethiwekhi amaningi wamahhala (kufaka phakathi leso esikhumulweni sezindiza saseBeijing's PEK) adinga ukuthumela inombolo yeselula yaseChina, abangabhalela yona ikhodi yokufinyelela, ngaleyo ndlela abanikeze umkhawulo kubantu abaningi bakwamanye amazwe.
Uma uhlola iChina khumbula ukuthi amanye amahhotela namahostela ahlinzeka ngokufinyelela kusuka kumagumbi angahle noma angabi mahhala; abanye banganikeza insizakalo engenawaya noma amadeskithophu ambalwa endaweni yokuphumula.
Izibalo Zamakhosi we-Ming ne-Qing Dynasties eBeijing naseShenyang
I-Mausoleum yoMbusi Wokuqala weQin
I-Peking Man Isayithi e-Zhoukoudian
Isakhiwo Sase-Complex Yasendulo ezintabeni zeWudang
Ingqopha-mlando Yasesigodlweni SasePotala, eLhasa 1
I-Mountain Resort kanye namathempeli ayo angaphandle, i-Chengde
I-Temple and Cemetery yeConfucius kanye neKong Family Mansion eQufu
ILushan National Park
Idolobha lasendulo lasePing Yao
Izingadi Zasendulo zaseSuzhou
Idolobha Elidala LaseLijiang
Ihlobo lasehlobo, Ingadi ye-Imperial eBeijing
Ithempeli lezulu: I-altare le-Imperial Sacrificial eBeijing
Ama-villages asendulo eSouthern Anhui - uXidi noHongcun
Ama-Imperial Tombs we-Ming ne-Qing Dynasties
IMount Qingcheng kanye neHujiangyan Irrigation System
Amadolobha Amakhulu Namasondo oMbuso WaseKoguryo wasendulo
Isikhungo Somlando saseMacao
I-Kaiping Diaolou kanye Nemizana
Izikhumbuzo Zomlando ZaseDengfeng “EsiKelweni Sezulu Nomhlaba”
I-West Lake Cultural Landscape ye-Hangzhou
Umhlaba Wamasiko weHonghe Hani Rice Terrace
Imigwaqo Silk: I-Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor *
I-Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape
I-Kulangsu, i-Historic International Settlement
Amabhongo Emivubukulo Yamadolobha eLiangzhu